ဘိုးဘွားတွေကို အမှည့်ခြွေ နေတဲ့ ကိုဗစ် (ဒီကမ္ဘာမြေကနေ ထွက်သွားပါတော့) – Myanmar
ဘိုးဘွားတွေကို အမှည့်ခြွေ နေတဲ့ ကိုဗစ် (ဒီကမ္ဘာမြေကနေ ထွက်သွားပါတော့)
ကျစရာ မျက်ရည်လဲ မကျန်တော့ပါ..
အဘွားဆန်ပြုတ်လား၊ ငှက်သိုက်လား၊ ကြက်ပေါင်းရည်လား၊ Ensure လား ဘာသောက်ချင်လဲအဘွား..
ဆန်ပြုတ်အရင်သောက်မယ်.. ပြီးရင် ငှက်သိုက်နဲ့ ကြက်ပေါင်းရည်နဲ့ Ensure သောက်မယ်..
ကျနော်ပြုံးမိ.. Good အဘွားအာ့လိုစားနိုင်လို့ ကောင်းတာမြန်တာ.. ဆန်ပြုတ်လေးကို ငါးကြော်လေးနွှင်ပြီးခွံ့။ စားလိုက်တာ ကုန်ရော Fish is better than meat နော်သား Yeah it’s rich of omega3& good for elderly patients Right right ပြောသေးတယ်..
ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ သားလေးရယ်.. သားလေးတို့ကျွေးလို့ အဘွားအသက်ရှင်တာ.. နို့မို့ဆို အဘွားငတ်သေမှာ ဝေ့ကနဲ တက်လာတဲ့ မျက်ရည် အဘွားမမြင်သွားဘူး.. အဘွားသားက ၅၁ နှစ်နဲ့ ဒီလ ၆ ရက်နေ့ကဆုံးသွားတယ်..
အဘွားညီမ နှစ်ယောက်က ဟိုဖက် centre မှာလေ.. ဟုတ်အဘွား.. fighting နော်.. အေးပါသားရယ်.. I Try အဘွားအသက်ရှင်ချင်သေးလို့ ညကျရင်လဲကျွေးနော် သားက ခနနေ Duty ထွက်မှာ သေချာမှာခဲ့မယ်နော်.. Please order them သားရယ်..
စားနိုင်၊သောက်နိုင်တာရယ် ဆရာဝန်‌တွေရဲ့ ၂၄ နာရီမပြတ် ကုသမှုတွေရယ်၊ သူနာပြုတွေရဲ့ ပြုစုမှုတွေရယ်ကြောင့် မကြာမီအချိန်အတွင်း ဆေးရုံဆင်းရတော့မယ်လို့ ထင်ခဲ့တာလေ။ ခု ဆုံးသွားပြီတဲ့..
အချိန်နဲ့အမျှ ဆိုးသွားစေနိုင်နဲ့ရောဂါ.. နင်အရမ်းရက်စက်တာပဲ ကိုဘစ်ရယ် တကယ်အပြင်ထွက်ပျော်ပါးခဲ့တာ ငါတို့လေ.. ငါတို့လူငယ်တွေကိုကျ အပြစ်မပေးဘဲ အပြစ်မရှိ၊ အိမ်ထဲနေတဲ့ ငါတို့ဘိုးဘွားတွေကိုမှ လုပ်ရက်တယ်ဟာ တစ်ရက်တစ်ရက် ‌ထွက်သွားကြတဲ့ အဘိုးအဘွားတွေအကြောင်း.. volunteer တွေ စကားထိုင်ပြောကြရင်း ဖြေမဆည်နိုင်။ မျက်ရည်တွေလဲ မရှိတော့ပါဘူးဗျာ..
၁၅ ပေ ရှည်တဲ့ စပါးအုံးမြွေ ရန်ကုန်မှာတွေ့